FarmVille2အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
1.120.8603 for Android
ဒေါင်းလုပ် APK（147.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် FarmVille 2: Tropic Escape
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောကစားစရာအသစ်များဖြင့်ပြည့်စုံသောကျွန်းဆွယ်သို့ထွက်ခွာပြီး FarmVille ၏ထုတ်လုပ်သူများထံမှဤရောင်စုံအခမဲ့ဖြစ်သည်
စွန့်စားမှုသည်သင်၏ကျွန်းတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်! , လယ်ယာထူးခြားတဲ့အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ယာဉ်ပျော်စရာအချိုရည်များနှင့်ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် - - သင့်ကအရမ်းကိုယ်ပိုင်အပူပိုင်းကျွန်းပေါ် Adventures ရှာ - အားလုံးကိုသင့်ကျွန်းအိမ်ပြန်မခေါ်သောအပူပိုင်းကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားတိရစ္ဆာန်များ၏ Discover - Run ကို
TO သို့အပူပိုင်းလွတ်မြောက်ရန် ပင်လယ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းနှင့်ပရဒိသုဘ ၀ သစ်ကိုစတင်ပါ။ mini ကစားနည်းများကိုကစား။ Ting ကဲ့သို့သောဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားပါ။
ရှေးဟောင်းသုတေသန၊ လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ဘဏ္REာတိုက်များ - ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်နှင့် surfing ကျွမ်းကျင်သူကဲ့သို့သောကျွန်းလမ်းညွှန်များနှင့်အတူပုံပြင်အခြေပြုရှာဖွေမှုများကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။ လျှို့ဝှက်အခန်းထဲမှလျှို့ဝှက်ရတနာများနှင့်ရှားပါးသောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေပါ။ ကျွန်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေရန်မချိန်းထားသောနေရာများကိုရှာဖွေပါ။
သင့် GU ည့်သည်များအတွက်အဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်း - ကျွန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများ ပရဒိသု - Tiki Bar၊ ဆူရှီ၊ Artisan အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အခြားအရာများကိုဝယ်ယူပါ။ ကျွန်းပေါ်တွင်ပျော်မွေ့ရန် guests ည့်သည်များကိုကူညီရန်သင်၏တည်းခိုခန်းကိုချဲ့။ လမ်းညွှန်များကိုငှားရမ်းပါ။
ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်နှင့်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ဆုများ - တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စင်တာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း o Ting ၏အကူအညီဖြင့်သင့်ကျွန်းကိုသဘာဝတိရစ္ဆာန်လမ်းညွှန် - ရှားရှားပါးပါးနှင့်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောတိရိစ္ဆာန်များကိုသင်၏ကျွန်းပေါ်သို့အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်ကျွေးမွေးပါ။ - တိရစ္ဆာန်များ၏ဓါတ်ပုံများကို photos ည့်သည်များအတွက်အမှတ်တရလက်ဆောင်များအဖြစ်ရယူခြင်းဖြင့်ဆုများရယူပါ။ အခြားကျွန်းများနှင့်အတူ - ကုန်သွယ်လှေကိုအသုံးပြု။ အခြားကစားသမားများနှင့်ကုန်သွယ်ရေး - ကြက်ဥတိုတောင်း? အိမ်နီးချင်းကျွန်းများမှသင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ပါ။ သင်၏ဈေးနှုန်းကိုဖော်ပြပြီးအပိုကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်လက်မှုပစ္စည်းများကိုရောင်းချပါ။ သင်အကြွေစေ့များများလေလေသင့်ကျွန်းပေါ်တွင်ပိုမိုလုပ်နိုင်လေဖြစ်သည်။
အပိုဆောင်းထုတ်ဖော်မှုများ• Zynga ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်အခြားအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီhttp://www.zynga.com/privacy/policy.•တွင်ဤဂိမ်းသည်အသုံးပြုသူအား Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုကွန်ယက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ။ လူမှုကွန်ယက် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များလည်းအကျုံးဝင်သည်။ •ဂိမ်းကိုအခမဲ့ကစားနိုင်သည်၊ သို့သော်အပိုပစ္စည်းနှင့်ပရီမီယံငွေကြေးအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ • Zynga Inc နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်များမှအထူးကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ပွဲများနှင့်အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်အားအခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်းကို http://m.zynga.com/legal/terms-of-service တွင်တွေ့နိုင်သည့် Zynga သတ်မှတ်ချက်များ ၀ န်ဆောင်မှုအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည် http://www.zynga.com/privacy/policy တွင်ရှိသော Zynga ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီဖြစ်သည်။
ဘာအသစ်လဲ FarmVille 2: Tropic Escape 1.120.8603
Farmville2Tropic Escape - The Coral Reef ||| Game Walkthrough, Gameplay Part 1
FarmVille2: Tropic Escape game 2021|| Gameplay walkthrough || Asad Games Warrior
Asad Games Warrior
Farmville : Tropic Escape Unlimited Everything original hack 2017(No Mod)
မုဆိုးဂိမ်း : သမင် မုဆိုးgame 2020
ေဆာ့ လို့ ေကာင်း
I want to get back the game account I used to play login I want to go back to the previous step, please
This game is crazy my mind.
spartan ye'lay spartan ye'lay
This game is so happy